19 ပတ်သားကလေး - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » ကလေးငယ်ပထမနှစ် » 19 ပတ်သားကလေး
ငိုကြွေးခြင်းသည် သင့်ကလေး၏ အကောင်းဆုံးဆက်သွယ်မှုပုံစံဖြစ်သော်လည်း၊ ရီမောပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့လည်း သူအစပျိုးနေပါသည်။ ပျော်စရာကောင်းသော အံ့သြမှုများတွင် အော်ဟစ်ရီမောစပြုနေပါပြီ။ သင်သူ့ကို စောင်အောက်မှ ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီး ခြောက်သည့်အခါ၊ ပုံးတစ်ခုထဲမှ အရုပ်ထွက်လာသည့်အခါမျိုးတွင် သူ့ကို လန့်သွားစေသည့်အခါမျိုးတွင် ရီမောပါလိမ့်မည်။ ရီစရာကိစ္စများတွင် ရီမောရန်၊ ပြုံးရန် သင့်ကလေးကို ကူညီပါ။ ကလေးများသည် အသံအမျိုးမျိုးကို ကြားရသည်ကို နှစ်သက်သည့်အတွက် အရုပ်အသစ်အဆန်းများမလိုဘဲ သင်ကိုယ်တိုင်အသံများဖန်တီးနိုင်သည်။
၁၉ ပတ်ကာလတွင် သင့်ကလေးသည် –
• ထိုင်သည့်အခါ ခန္ဓာကိုယ်ကို မတ်မတ်ဖြစ်အောင်ထိုင်တတ်သည်။
• တစ်ဖက်သို့ လှည့်နိုင်သည်။
• အသံလာရာသို့ အာရုံစိုက်တတ်သည်။
• စကားလုံးအချို့ကို စတင်ပြောနိုင်သည်။
သင့်ကလေးနှင့်အတူရီမောပေးခြင်းဖြင့် သင့်ကလေးကို များများရီမောတတ်စေရန် အားပေးပါ။ သင့်ကလေးကို ပျော်ရွှင်စေရန် အသံမျိုးစုံထွက်အောင် ဖန်တီးနိုင်သည်။ အရုပ်တစ်ခုကို ပေးပြီးလှုပ်ရမ်းပြပါ။ အရုပ်ကို အသံထွက်အောင် ပြုလုပ်နေစဉ် သင့်ကလေး၏ အမူအရာကို ကြည့်ပြီး သူစိတ်ဝင်စားမှု ရှိမရှိကို ကြည့်ပါ။ သင့်ကလေးကို မတူညီသည့် ပစ္စည်းများကို ဆော့ကစားစေခြင်းဖြင့် အသစ်များကို စူးစမ်းရှာဖွေတွေ့ရှိစေရန် အားပေးပါ။ ကစားနည်းများကို စိတ်ဝင်တစားကစားခြင်းကို စောင့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ကလေး၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို သိနိုင်သည်။
ဆရာဝန်တိုင်းမှာ ကလေးငယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးကို စစ်ဆေးဖို့ သူ့နည်းလမ်းနဲ့သူ ရှိကြပါတယ်။ စစ်ဆေးမှုတွေဟာ ကလေးရဲ့ လိုအပ်ချက်ပေါ်လည်း မူတည်ပါတယ်။ ဆရာဝန်မှ အောက်ပါတို့မှ လိုအပ်သည်များကို စစ်ဆေးပါလိမ့်မည်။
• ဒုတိယအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း။ ကလေးတွင် အခြားကျန်းမာရေးပြသနာများမရှိလျှင်။
• သင့်ကလေးတွင် ပထမအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး တုံ့ပြန်မှုများရှိလျှင် ဆရာဝန်ကို အကြောင်းကြားပါ။
ကလေးအသက် ၁၉ ပတ်တွင် ကလေးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါတို့သည် သင်သိထားသင့်သော အကြောင်းအရာအချို့ဖြစ်ပါသည်။
ရုတ်တရက် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းတွင် ပိုးဝင်ခြင်း
အအေးမိခြင်းနှင့် ဆင်တူသောလက္ခဏာများရှိသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်ပွားသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်သည် ရောဂါအကြီးကြီးမဖြစ်စေပါ။ သို့သော် နားတွင်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၊လေပြွန်ရောင်ခြင်း နှင့် နမိုးနီးယား အဆုတ်ရောင်ရောဂါများဖြစ်သောအခါ ရင်ကျပ်ရောဂါနှင့် အခြားသောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်သည့်အတွက် အန္တရာယ်များသည်။ အသက် ၂နှစ်အောက်ကလေးငယ်များသည် ထိုဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရနိုင်ချေများသည်။ အသက် ၆ လအောက် ကလေးများတွင် အထူးသဖြင့် လမစေ့ဘဲမွေးသော ကလေးများ၊ကိုယ်ခံအားစနစ် မကောင်းသော ကလေးများတွင် ဖြစ်လျှင် အန္တရာယ်များသည်။
အစပိုင်းတွင် သိပ်မခံစားရနိုင်သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ရောဂါပိုဆိုးလာနုိုင်ပြီး အသက်ရှူရခက်ခြင်းများဖြစ်လာနိုင်သည်။ သင့်ကလေးတွင် နှာခေါင်းပေါက်များပိုကျယ်လာခြင်း၊ ရင်ဘတ်ဖောင်းလာခြင်း၊ အသက်ရှူသည့်အခါ အသံမြည်ခြင်း၊ အသက်ကို ဖော့၍ ရှူခြင်း၊ နှုတ်ခမ်းများ လက်သည်းများ စိမ်းလာခြင်း၊ နှင့် အစားမစားခြင်းကဲ့သို့သော ရောဂါလက္ခဏာများရှိပါက ရောဂါပြင်းထန်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ဆရာဝန်ထံအကြောင်းကြား၍ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခံပါ။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ပွင့်စေသော ရှူဆေးများကို ဆရာဝန်မှ ပေးပါလိမ့်မည်။ ပိုးသတ်ဆေးများသည် ရောဂါကို သက်သာအောင် မလုပ်နိုင်ပါ။ သင့်ကလေးကို အိမ်တွင် သက်သာစေမည့် နည်းလမ်းများကို လုပ်ပေးနိုင်သည်။ ကလေးကို ရေများများတိုက်ခြင်း။ ဆေးလိပ်ငွေ့များမှ ရှောင်ရှားခြင်း ဖြင့် အသက်ရှူရခက်ခြင်းကို သက်သာစေနိုင်သည်။
နှာခေါင်းထဲသို့ ထည့်ရသည့် ဆေးရည်အစက်ချပေးလျင် နှာခေါင်းပိတ် သက်သာစေသည်။ ခေါင်းကို လည်း မတ်မတ်နေစေရန် ထိန်းကိုင်ထားပါ။ ကလေးတွင် အဖျားကြီးလျှင် ကိုယ်ပူကျဆေးပေးပါ။ အဆုတ်မကောင်းသောကလေး၊ နှလုံးရောဂါမွေးပါရှိသောကလေး နှင့် လမစေ့သော ကလေးများတွင် ရောဂါပိုးကို ကာကွယ်ရန် ကာကွယ်ဆေးထုိုးသင့်သည်။
နှလုံးတွင် မူမမှန် အသံများကြားရခြင်း
နှလုံးသည် အသက်ရှင်မှုအတွက် အရေးကြီးသော အင်္ဂါဖြစ်သောကြောင့် မည်သည့် ကျန်းမာရေးပြဿနာမဆို အရေးကြီးသည်။ သို့သော် နှလုံးတွင် မူမမှန် အသံပိုများ ကြားရခြင်းသည် မပြင်းထန်ဘဲသူ့ဘာသာသူပျောက်သွားနိုင်သည်။ ဆရာဝန်မှ ကလေးတွင် နှလုံးအသံအပို ကြားနေရသည်ဟု ဆိုပါက ကလေး၏ နှလုံးသည် ပုံမှန်မဟုတ်ပါ။ နှလုံးအပိုသံသည် နှလုံးသို့ သွေးဖြတ်စီးဆင်းသည့်အခါ ကြားရသော ပုံမှန်မဟုတ်သော အသံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်မှ ထိုပုံမှန်မဟုတ်သောအသံသည် အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ရသည်ဆိုသည်ကို ရှာဖွေပါလိမ့်မည်။
များသောအားဖြင့် နှလုံးမူမမှန် အသံပိုသည် နှလုံး ဖြစ်ပေါ်မှုတွင် ပုံစံမူမမှန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တတ်သည်။ ထိုအသံသည် အန္တရာယ်မရှိဘဲ နားကြပ်ဖြင့်နားထောင်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်သည်။ သင့်ဆရာဝန်မှ အခြားစစ်ဆေးစရာများ၊ ကုသမှုများမရှိနိုင်ပါ။ ကလေးတစ်ဝက်လောက်တွင် ထိုအခြေအနေမျိုးကို ခံစားရနိုင်ပြီး နှလုံးဖြစ်ပေါ်မှုဖြစ်စဉ်ပြည့်စုံသွားလျှင် ထိုအသံလည်းပျောက်သွားပါလိမ့်မည်။ သင်စိုးရိမ်နေလျှင် သင့်ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းပြီး သင့်ကလေး၏ နှလုံးအခြေအနေနှင့် ရှေ့ဆက်ကလေးတွင် ထိခိုက်မှုရှိမည် ရှိမည်ကို မေးမြန်းသိရှိနိုင်သည်။
အောက်ပါတို့သည် သင်စိုးရိမ်ပူပန်နေသော အကြောင်းရင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။
နှိပ်နယ်ခြင်းသည် လူကြီးများအတွက်သာမဟုတ်ပါ။ လွန်ခဲ့သော နှစ်များက ကလေးများကို နှိပ်ခြင်းသည် အသုံးဝင်သော ကုသမှုအဖြစ် ကလေးပိုပြီး ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားလာစေရန်၊ပိုပြီး အိပ်ပျော်စေရန်၊အသက်ရှူပိုကောင်းစေရန်နှင့် ပိုပြီး လန်းဆန်းတက်ကြွစေရန် အသုံးပြုကြသည်။ ကလေးကို မည်သို့ နှိပ်ပေးရမည်ကို သိရှိရန် စာအုပ်များဖတ်ခြင်း၊ ဗီဒီယိုများကြည့်ခြင်း၊ပညာရှင်များမှပေးသောသင်တန်းများတက်ခြင်းဖြင့် သင်ယူနိုင်သည်။
အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်း ကလေးကို နှိပ်နယ်ပေးနိုင်သည်။
• ကလေးအတွက် သင့်တော်သောအချိန်ကိုရွေးပါ။
• သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမည့် နေရာကို ဖန်တီးပါ။
• သင်နှစ်သက်သော အဆီကို အသုံးပြုပါ။
• ကလေး၏ တုံ့ပြန်မှုအတိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။ ကလေး၏ တုံ့ပြန်မှုကို ကြည့်၍ သူနှစ်သက်သည်၊ မနှစ်သက်သည်ကို သင်သိနိုင်ပြီး ဘယ်အချိန်တွင် ရပ်တန့်ရမည်ကို သိနိုင်ပါသည်။
• လှုပ်ရှားမှုကို စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ ကလေးများသည် ညင်ညင်သာသာကိုင်တွယ်ခြင်းကို နှစ်သက်သည်။
• ခေါင်း၏ ဘေးနှစ်ဘက်တွင် လက်နှင့်ကိုင်ထားပြီး စက္ကန့်အနည်းငယ် အုပ်ကိုင်ထားပါ။ ပြီးလျှင် လက်နှစ်ဘက်ဖြင့် မျက်နှာကို နှစ်ခြမ်းခွဲ၍ ဆွဲပွတ်ပေးပါ။ခေါင်းမှ ခြေဆုံးအထိ လက်နှစ်ဘက်ဖြင့်ပွတ်သပ်ပေးနိုင်သည်။
• ခေါင်းကို စက်ဝိုင်းပုံစံနှိပ်ပေးပါ။ နဖူးကို အလယ်မှ လက်ဖြင့်ပွတ်ပေးပြီး အပြင်ဘက်ကို ဆွဲယူပါ။
• ရင်ဘတ်ကို အတွင်းကနေအပြင်ဘက်သို့ ဖွဖွပွတ်သပ်ပါ။
• ၀မ်းဗိုက်ကို အပေါ်မှအောက်သို့ လက်ဖြင့် ပွတ်ဆွဲပြီး ဘေးဘက်သို့ စက်ဝိုင်းပုံစံ သပ်ဆွဲပါ။ ၀မ်းဗိုက်ပေါ်တွင် လက်ဖြင့် ဟုိုဒီ ပွတ်သပ်ပေးပါ။
• လက်မောင်းနှင့် ခြေထောက်ကို သင့်လက်များအတွင်းတွင် ညင်ညင်သာသာပွတ်သပ်ပေးပါ။ လက်ဖ၀ါးကို ဖြန့်၍နှိပ်နယ်ပေးပါ။
• ခြေထောက်ကို မြှောက်ချည် ချချည်လုပ်ပေးပါ။ ခြေချောင်းများကို ဖြောင့်တန်းစွာထားပြီး နှိပ်ပေးပါ။
• ကလေးကို မှောက်ထားပြီး ကျောဘက်ကို အပေါ်ဘက်မှအောက်ဘက်သို့ ပွတ်ဆွဲချပြီး နှိပ်နယ်ပေးပါ။
• နှိပ်ပေးနေစဉ် ကလေးကို စကားပြောပြခြင်း၊ သီချင်းဆိုပြခြင်းကို ပြုလုပ်နေပါ။ သူ့ကိုယ်ပေါ်တွင် လက်တစ်ဖက်အမြဲတင်ထားပါ။
ကလေးကို နှိပ်နယ်ပေးဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ကလေး၏ တုံ့ပြန်မှုများက သင့်ကို အံ့အားသင့်စေပါလိမ့်မည်။
ထိုနောက် အပတ် ၂၀ တွင် သင့်ကလေးသည် မည်သို့ဆက်လက်ကြီးထွားလာပါမည်လဲ။
Murkoff, Heidi. What to Expect, The First Year. New York: Workman Publishing Company, 2009. Print. Page 289-309.